ခရစ်တော်၏ဝေဒနာနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှန်ကန်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းခြင်း| Christ’s Suffering – The True and False | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၅ခုမြောက်ဒေသနာ)
CHRIST'S SUFFERING-THE TRUE AND THE FALSE
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏
၂၀၁၃၊ မတ်လ ၁၇ရက်၊ လော့အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ဘြွမ ။ဩွခင်ဘုရားနေ့ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြု အစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“သို့သော်လည်းထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်လေ၏။ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းသို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရသော သူဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပြီ” (ဟေရှာယ ၅၃း၄)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်အစပိုင်း၌ ယေရှုသည် “ငါတို့၏အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက်လေ ၏” ဟူ၍မိန့်ကြားထားပါသည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်း၊ ရှင်မဿဲ ၈း၁၇၌ ကိုးကားရည်ညွန့် ထားပါသည်။
“ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင် ရွှက်ပေးသည်ဟု ပရောဖက်ဟေရှာယ ဟောထားသော စကားပြည့်စုံမည်အကြောင်း ဖြစ် သတည်း” (ရှင်မဿဲ ၈း၁၇)။
မဿဲ ၈း၁၇ ကျမ်းပိုဒ်သည်၊ ဟေရှာယ ၅၃း၄ ကိုကိုးကားထားခြင်းဟု ဆိုခြင်းထက် ပို၍စိတ် ဝင်စားနှလုံးသွင်းရမည့် ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာအက်ဝပ်ဒ် ဂျေယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ရှင်မဿဲ ၈း၁၇၌ ဖော်ပြထားသောကျမ်းတွင်၊ ဖျားနာခြင်းသည် အပြစ်ကြောင့်ဝင်ရောက်လာသည်ကို ဖောjfပခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်၏အကျိူးအဆက်ဖြစ်သော သေခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း အကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဖျားနာခြင်းသည် အပြစ်နှင့်ယှဉ်တွဲလာခြင်းဖြစ်သည်” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, volume 3, p.345).
ရှင်မဿဲ ၈း၁၇သည် ဖျားနာခြင်းမှအနာပျောက်ကင်းဖို့ရန် ယေရှုကိုစားအသေခံခြင်းကို ဖော်ပြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိရမည့်အချက်မှာ၊ ရှင်မဿဲအားဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက် တာ၌ အရေးကြီးသောအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ပါမောက္ခ ဓံနညါsအနညဘနမါ ဓ သည် ခရစ်တော်၏အစေခံ ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ အတိအကျဖော်ပြခဲ့သည်မှာ၊ ၎င်းသည် အပြစ်၏အကျိုးအဆက်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖျားနာခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများကို သူတို့အထဲ၌ တမင်တကာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိက အချက်သည် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှ (ဟေဗြဲဘာသာမှ ဟေရှယ ၅၃း၄) ဖျားနာခြင်းသည် ခရစ်ယာန် အသက်တာ၌ စိတ်အနှောက်အယှက်နှင့် ညှဉ်းငွေ့ဖွယ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ (quoted in Young, ibid, page 345, footnote 13).
ယေရှုခရစ်တော်သည် ဝိညာဉ်ကို အနာပျောက်ကင်းသော သက်သေအထောက်အထားများ ရှိသည် သာမက သတင်းကောင်းကျမ်း ၄ကျမ်းတွင် တွေ့ရှိရသောယေရှုခရစ်တော်၏ အနာငြိမ်းခြင်းကို သေ ချာစွာ ဖတ်ရှုဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ရှင်လုကာ ၁၇း၁၃ မှာ၊ “သခင်ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်တို့ ကို ကယ်မသနားတော်မူပါဟု ဟစ်ကြော်ကြ၏”ဟု နူနာစွဲတစ်ကျိပ်တို့သည် သခင်ယေရှုထံသို့ ငိုယိုကာ အော်ဟစ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ သခင်ယေရှုသည် မြင်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ထံသို့သွား၍ ကိုယ်ကိုပြကြလော့ “သူတို့သည် သွားစဉ်တွင် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏” (လုကာ ၁၇း၁၄)။ ထိုသူတို့သည် သခင်ယေရှု၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်ကြပါ။ ထိုသူတို့ထဲမှ တစ်ယောက်ကသာလျှင် နောင်တရသူဖြစ်၏။ ထိုသူသည် မိမိ၏အပြစ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ “ခြေတော်ရင်း၌ ပျက်ဝပ်၍ ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါသည်ဟု ဝန်ခံလေ၏၊ ထိုသူသည် သခင်ယေရှု၌ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခဲ့သူဖြစ်သည်။ (လုကာ ၁၇း၁၆) ပြီးနောက် ယေရှုက “သင်ထ၍ သွားလော့၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင်၏အနာကို င်ြိမ်းစေပြီဟု ထိုသူအား မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၁၇း၁၉)။ ၎င်းအဖြစ်အပျက်သည် ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ အနာကို ငြိမ်းစေသကဲ့သို့ ဝိညာဉ် ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကို သခင်ယေရှုက ကုသခြင်းကိုတွေ့ရှိရသည်။ ယောဟန် အခန်းကြီး ၉တွင် တွေ့ရှိရသော မျက်ကန်းတစ်ဦးသည် ယေရှုခရစ်တော်၏တန်ခိုးအားဖြင့် အနာငြိမ်းခြင်းများကို ကျွန်ုပ် တို့တွေ့ရှိရပါသည်။ ပထမ၌ မျက်ကန်းသည် သခင်ယေရှုအား “ပုရောဖက် တစ်ပါးသာ” ထင်မှတ် ခဲ့သည် (ယောဟန် ၉း၁၇)။ ထို့နောက် သူပြောခဲ့သည်မှာ၊
“သခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဟု လျှောက်၍ ပျက်ဝပ်ကိုးကွယ်လေ၏” (ယောဟန် ၉း၃၈)။
၎င်းအဖြစ်အပျက်သည် ထိုသူအားကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိစေသည်။
ထို့ကြောင့် ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုသည် ဒုတိယလွတ်ငြိမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဓိက ဟေရှာယ အနာဂတ်တိကျမ်း ၅၃း၄သည် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဒေါက်တာ ဂျေ.ဗာနွန် အမ်စီဂီပြောခဲ့သည်မှာ၊
၎င်းဟေရှာယကျမ်း၌ ရိုးရှင်းစွာတွေ့ရှိရသော အကျွန်ုပ်တို့၏ အနာငြိမ်းခြင်းသည် ဒဏ်ချက် များအားဖြင့် အနာပျောက်ခြင်းအကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သင်ကျွန်ုပ်ကို ပြောခဲ့သည်၊ “ထိုအရာများအတွက် သင်သေချာရဲ့လား” ၊ ထိုကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့သော အရာများသည် အစေခံကျွန် ပီတာက ဤကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့သည်၊ “ငါတို့သည် အပြစ်နှင့် ဆိုင်သောအရာ၌ အသေဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌ အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်း၊ ငါတို့ အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာ ခံတော်မူပြီ၊ ဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့် သင်တို့ သည် အနာပျောက်လျှက်ရှိကြ၏” (၁ပေ ၂း၂၄)။ ဘာအတွက် ကုသခဲ့သလဲ? “အပြစ်များ” ထိုအချက်နှင့်ပါတ်သတ်၍ ရှင်ပေတရုသည် အပြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်၊ (Mc. Gee, ibid., page 49).
ထိုရှင်းလင်းချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နောက်ကြောင်းဆွေးနွေးဖွယ်ဖြစ်သည်။
“သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက်လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရသောသူဖြစ် သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသတ်ကြပြီ” (ဟေရှယ ၅၃း၄)။
ကျမ်းပိုဒ်သည် အခြေခံတရားအားဖြင့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထား၍၊ (၁) ကျမ်းစာ၌ဖော်ပြထားသော ယေရှုခရစ်တော်၏ စစ်မှန်သောဒုက္ခများ၊ (၂) မျက်ကန်း၏မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်း။
၁။ ပထမ၊ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားသောယေရှုခရစ်တော်၏ ဒုက္ခဆင်းရဲများသည် အစစ် အမှန်ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့ရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက်လေ၏” (ယေရှာယ ၅၃း၄)။
စကားလုံး၌ “သေချာစွာ” ဟူသော အချက်သည် ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာများ အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် ကို ဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်စကားလုံး၌ “သေချာစွာ” ဟူသောအချက်သည် မျက်ကန်းလူ၏မှား ယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ “သေး” ဟူသောစကားလုံး၏ မှားယွန်းစွာ ဖော်ပြချက်မှာ၊
“သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက် လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရသောသူဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသတ်ကြပြီ” (ဟေရှယ ၅၃း၄)။
ထိုနည်းတူ “ဒုက္ခ” နှင့် “ဝမ်းနည်းခြင်း” စကားလုံးအသုံးနှုန်းကို နားလည်ရပါမည်။ ဟေဗြဲ ဘာသာစကား၌ “ဒုက္ခ”အဓိပ္ပာယ်သည် “ရောဂါဝေဒနာ”ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။ ထိုအချက် သည် ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၁ အခန်းငယ် ၅-၆တွင် “အပြစ်”အတွက် ရေးဖွဲ့သုံးနှုန်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုနည်း၎င်း ဤနေရာ၌ “အပြစ်”ကို ရေးဖွဲ့သုံးနှုန်းထားသည်။ ဒုက္ခသည် အပြစ်၏ဝေ ဒနာများကို ပုံဆောင်သည်။ ဝမ်းနည်းခြင်းသည် နာကျင်ခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ် ၏ဝေသနာများနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်း၏နာကျင်ခြင်းများကို အပြစ်သည် ပုံဖော်နေသည်။
ပြီးနောက် “ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်း” စကားလုံးအသုံးအနှုန်းသည် အပြစ်ကို “သယ်ဆောင်ရန်” ဟု တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းအဓိပ္ပါယ်သည် အဝေးကိုသယ်ဆောင်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ပို၍ သက်ရောက်သည်၊ ဆိုလိုရင်းမှာ အဝေးသို့သယ်ဆောင်ခြင်း၊ အပေါ်သို့မတင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Yသကညါယ ငဘငိ.ယ စ. ၃၄၅). ခရစ်တော်သည် လူသားများ၌ရှိသောအပြစ်များကို အဝေးသို့ သူကိုယ်တိုင် ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အပြစ်အလုံးစုံကို အဝေးသို့ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သည် သူ့၏လက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်းကာ ကာရာနီကုန်းပေါ်သို့ ဦးတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းအချက်နှင့် ပါတ်သတ်၍ ခရစ်တော်အား ရှင်ပေါလုဖော်ပြခဲ့သည်မှာ၊
“ငါတို့သည် အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌ အသေဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌ အသက်ရှင်စေ မည်အကြောင်း၊ ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီ၊ ဒဏ်ချက် တော်များအားဖြင့် သင်တို့သည် အနာပျောက်လျှက်ရှိကြ၏” (၁ပေ ၂း၂၄)။
Kနငူ နှင့် Dနူငအဖျခ့ တို့၏အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်မှာလည်း၊
ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခဆင်းများထဲ၌ သူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ ဒုက္ခများကို ခံစားနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုက္ခ ဆင်းရဲများကို မျှတူခံစားခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ့၏ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များ အတွက် ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လူသားတစ်ယောက်အနေနှင့် တခြားသူ၏ဒုက္ခများကို ခံစားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား ယူတင်ဝတ် ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် အစားထိုးပေးသူဖြစ်သည်။ (Franz Delitzsch, Th.D., Commentary on the Old Testament in Ten Volumes, William B. Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 316).
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ကို ထမ်းရင်း ကာရာနီကုန်း ပေါ်သို့ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လူသားများ၏ အပြစ်များအတွက် အခကို ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အစားထိုးခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။ သီချင်းဆိုကြပါစို့၊
“ထိုdသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်း အပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက် ခြင်းကို ခံရလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
“ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏” (၁ကော ၁၅း၃)။
“သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက် လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရသောသူဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသတ်ကြပြီ” (ဟေရှယ ၅၃း၄)။
ဒေါက်တာ ဒါဘလူ.အေ. ခရစ်ဝီလ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ခရစ်တော် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းသည် အပြစ်၏ရလဒ်နှင့်အသီး ဖြစ်သည်။ ယေရှုကို အဘယ်သူသတ်ခဲ့သနည်း? မည်သူက ဘုရင့်၏တန်ခိုးတော်ကို ရှုပ်ချခဲ့သနည်း? ယေရှုအသေခံစဉ်၌ မည်သူတို့က သံမှိုရိုက်ခဲ့သနည်း? အဘယ်သူများ၏ အပြစ်ကြောင့် နည်း? ၎င်းအချက်သည် လူသားတိုင်းအတွက် အချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ သည် သခင်ယေရှု၏ ဆုသရဖူဆောင်းခြင်းအပေါ်၌ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အပြစ်များ သည် သခင်ယေရှု၏ လက်ပေါ်၌ သံမှိုရိုက်ခြင်းအပေါ်၌ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အပြစ် များသည် သခင်ယေရှု၏ နှလုံးသားထဲ၌ကိန်းဝပ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်အပြစ်များသည် ယေရှု ခရစ်တော်ဘုရား သစ်တိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခြင်းအားဖြင့် သံမှိုရိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်း အချက်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယေရှုဘုရားသည် အမှန်တကယ် အသေသတ် ခြင်းခံခဲ့ရသည်ကို အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ (W.A. Criswell, Ph.D., “The Blood of the Cross,” Messages From My Heart, REL Publications, 1994, pages 510-511).
“သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက် လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရသောသူဖြစ် သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသတ်ကြပြီ” (ဟေရှယ ၅၃း၄)။
“ရိုင်းစိုင်းလှ၍၊ ရှက်ကြောက်ဖွယ်များဖြစ်ခဲ့ရလည်း” တဖန်သီဆိုကြပါစို့!
ထိုအချက်သည် ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာများသည် အမှန်အကန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်၏ အပြစ်မျာ ;အတွက် ဆုတောင်းဖို့ရန်လည်းဖြစ်သည်။ လူသားများ၌ ထိုအချက်များသည် ပုန်ကန်ခြင်း သဘော၊ မျက်ကန်းခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း စသောအားလုံးအပေါ်၌ ယေရှုခရစတော် အသေ ခံခြင်း၏ သမ္မာတရားကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အချက်နှစ်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် မည်ကဲ့သို့ ဖော်ပြမည်ကို တွေ့ရမည်။
၂။ ဒုတိယ၊ မျက်ကန်းတစ်ဦးအားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဒုက္ခဝေဒနာသည် မှားယွင်းစွာဖော်ပြ သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆွေးနွေးချက်များကို နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြစို့! အတူတကွမက်တပ်ရပ်ပြီး ကျယ် လောင်စွာ ဖတ်ရှုကြပါစို့!
“သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက် လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရ သောသူဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသတ်ကြပြီ” (ဟေရှယ ၅၃း၄)။
“ဘုရားသခင်၏အချစ်ကို ရုတ်တရက်ခံစားနိုင်ဖို့ သာမက နာကျင်စေဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဒဏ်ချက်တော်ကို မသိနိုင်သေးပါ။” “ကျွန်ုပ်တို့”အားလုံးသည် အာဒံမှဆင်းသက်သော မျိုးနွယ်စုမှဖြစ်သည်။ သင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေခံခြင်း၊ ကိုယ်စားအသေခံခြင်းကို သိနားလည်ဖို့ ရန်စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မျက်စိကိုကန်းစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ ဒုက္ခဝေဒနာများနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဖါရိရှဲများကဲ့သို့ ဤကဲ့သို့ထင်ကြသည်။ “သင်သည် နတ်ဆိုးတစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်” ဟု ထင်ကြသည်။ သာမက ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုအား မိုက်မဲသူတစ်ဦး၊ ရူးသွပ်သူတစ်ဦးမျှသာ ထင်ခဲ့ကြသည်။ ယောဘ၏သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်မှာ၊ သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အပြစ်နှင့်မိုက်မဲ့မှုသည် ဆန်းကျင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထင်ရသည် မှာ၊ သခင်ယေရှုသည် အကောင်းဆုံးသော ကိုယ်စားအသေခံသူတစ်ဦးဖြစ်သည် သာမက၊ သူ့၏ အသေခံခြင်းသည် အရူအးကင်းမဲ့ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်နှင့်တစ်ချို့တစ်နေရာ၌ သခင်ယေရှု အသေ ခံခြင်းသည် ရိုးရှုင်းသောအသေခံခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သောသူများသည် သခင်ယေရှု၏ အသက်တာကို ပုံဆောင်ပြီး၊ တစ်ချို့သောသူများသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအား ရန်တိုက်ရန် စဉ်းစားကြံစည်ကြသည်။
ထိုးရိုက်ခံခြင်းလား? ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သိရမည်မှာ သခင်ယေရှု အမှန်တကယ်လက်ဝါး ကားတိုင်၌ အသေခံခဲ့ပါသည်! ဘုရားသခင်ကို ချစ်သလား? ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သိရမည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ချစ်သည်။ နာကျင်စေသလား? ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်ုပ်သိခဲ့သည့် အတိုင်းဖြစ်သည်! သခင်ယေရှုကို လက်ဝါးကားတိုင်၌ ထိုးရိုက်နှက်ခဲ့ကြပြီး သူ့၏မျက်နှာကို လက်သီးနှင့်ထိုးခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရပါသည်။ ရိုက်နှက်၊ ပုတ်ခတ်ခဲ့သည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ သိခဲ့ရသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ သံမှိုရိုက်ခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ရသည်။ ထိုအကြောင်း အရာနှင့်ပါတ်သတ်၍ လူတိုင်းသိရမည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုအပေါ်၌ အထင် လွဲခဲ့ကြသည်။ ဤအချင်းအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းများအပေါ် သခင်ယေရှုသည် အမှန် တကယ် ယူတင်ဝတ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ သခင်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်၌ အသေခံခြင်းကို ခံစားကြည့်ပါက သူသည် သူ့၏ကိုယ်ပိုင်အမှားနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်များ အတွက် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရသည်ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည်။
“သို့သော်လည်း မဟုတ်ပါ” ၎င်းအဖြစ်အပျက်သည် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ရုံသာမက၊ ဘုရားသခင်အလိုရှိသော ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရရှိစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ကိုယ်စား အသေခံခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ သမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဆန္ဒနှင့်လမ်းလွဲမှုများကို သခင်ယေရှုအားဖြင့် အစားထိုးဖို့ရန် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်စားပြုဖော်ပြ ခဲ့သည်။ (William MacDonald, Believer's Bible Commentary, Thomas Nelson publishers, 1995, p. 979).
သူ၏ဒဏ်ချက်တော်နှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို လွတ်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။
“သို့သော်လည်း၊ ထိုသူသည် ငါတ အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို ယူတင်ဆောင်ရွှက်လေ၏၊ ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဆုံးမ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို၎င်း၊ ခံရသောသူဖြစ် သည်ဟု ငါတို့ဆင်ခြင်သုံးသတ်ကြပြီ” (ဟေရှယ ၅၃း၄)။
မစတာ. ဂရီဖစ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို သီဆိုပါ။
သင်၌စစ်မှန်ခြင်းတကယ်ရရှိပါသလား? သခင်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခြင်းအ ကြောင်းအရာသည် သင်၏အပြစ်များအတွက် သယ်ဆောင်ခြင်းထက်၊ တခြားသောအကြောင်းအရာ သင်၌ ရှိပါသလား? ပြီးနောက် သင်သိရမည်မှာ၊ ခရစ်တော်အသေခံခြင်းသည် သင်၏အပြစ်များ အတွက် ကိုယ်စားအသေခံသူဖြစ်သည်။ သင်သည် ယေရှု၌ရိုးရှင်းစွာ ယုံကြည်လက်ခံမလား? သခင်ယေရှုသည် အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်များကို ဆေးကြောပြီး တရားမျှတစွာ ယူတင်ဝတ် ဆောင်ပြီး သင်သည် သခင်ယေရှု၌ ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ကိုးစားနိုင်မလား?
ကျွန်ုပ်သင်တို့နှင့်ဆွေးနွေးနေသည်မှာ၊ သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့် ဒုက္ခများသည် သင်၏ နှလုံးသားထဲ၌ များယွင်းစွာတွေးခေါ်ခြင်းကို ဖော်ထုတ်လျှက်၊ သခင်ယေရှု၏အကြောင်းကို သင့် အသက်တာထဲ၌ စီးဆင်းဖို့ရန် အကျွန်ုပ်ဆန္ဒရှိပါသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် အသေခံကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်သည်။ သူသည် ယနေ့အဖဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်၌ ထိုင်တော်မူသည်။ ကျွန်တော် သင်၌ဆွေးနွေးသည်မှာ၊ သင်၏အပြစ်များအတွက် ယေရှုကို ယုံကြည်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရန်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်အရာများသည် သခင်ယေရှု၏အကြောင်းကို သိနားလည်ဖို့ရန် မလုံလောက်သေးပါ၊ ခင်ဗျားသိရမည်မှာ၊ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ကယ်တင်ခြင်းမရသေး၍ ယေရှုခရစ်၏အသခံခြင်း အကြောင်းများကို နားလည်ရပါမည်။ သင်သိရမည်မှာ၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းအ ကြောင်းသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်ကို သိရမည်။ ယနေ့သင်မပြောင်းလဲရင်တောင်မှ ယေရှုသည် အပြစ်အားလုံးအတွက် ကိုယ်စားအသေခံခဲ့သည်။ သင်ယေရှုကို ကိုးစားရမည်။ ထမြောက်ခြင်းအ ကြောင်းကို ကိုးစားရမည်။ သင်သခင်ယေရှု၌ လုံး၀ယုံကြည်ကိုးစားအပ်နှံရမည်။ ယေရှုသည် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ထာ၀ရအသက်တံခါး၀ဖြစ်သည်။ ယခုယုံကြည်ပါ၊ ယခု ချက်ခင်းသင်၏အပြစ်များကို လွတ်မြောက်၍ကယ်တင်ခြင်းရမည်။ မစ္စတာ.ဂရီဖစ် သီချင်း ကိုပြန်ဆိုပါ။ အကယ်၍သင်သည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ ဆွေးနွေး လိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီး သီချင်းဆိုနေတုန်း အနောက်ခန်းထဲကို သွားပါ၊
ဒေါက်တာ. ချမ် ကျေးဇူးပြု၍ ထိုသူများအပေါ် ဆုတောင်းပေးပါ။ အာမင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘယ်လ် ပရုန်းဟုန်းမှ ၁ပေ ၂း၂၁-၂၅ ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
(၁၈၆၆-၁၉၆၀ ခုနှစ် သောမတ် အို. ချီချောလ်မ်၊ သီကုံးသော “ သူ၌ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်”)။
(ရှင်မဿဲ ၈း၁၇)၊ (လုကာ ၁၇း၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉)၊
(ရှင်ယောဟန် ၉း၁၇၊ ၃၈)၊ (၁ပေ ၂း၂၄)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၄၊ ၅)၊ (၁ကော ၁၅း၃)။
၂။ ဒုတိယ၊ မျက်ကန်းတစ်ဦးအားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဒုက္ခဝေဒနာသည် မှားယွင်းစွာဖော်ပြ သည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၄)။